सरकार ! मदन–आश्रित हत्याको वास्तविकता कहिले आउँछ ?
उमेशकुमार चौलागाईं काठमाडौं, ३ जेठ
तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुङ्गा दुर्घटना भएको २७ वर्ष भयो ।
३ जेठ २०५० मा भएको दुर्घटना अझै पनि नेपालीले बिर्सन सकेका छैनन् । तत्कालीन समयमा यो दुर्घटना होइन, हत्या हो भनेर एमालेले ठूलो आन्दोलन पनि गयो । तर सत्यतथ्य आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन । अझै पनि रहस्यको गर्भमै छ, किन ?
आज मदनको विचार जबजका प्रमुख सूत्रधार भनेर भन्ने ओली डब्बल नेकपाका अध्यक्ष छन् भने मदन श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति !
देशमा डब्बल नेकपाको झन्डै २ तिहाइको बलियो सरकार छ । यस्तो बेला मदन–आश्रितको हत्या गरिएको थियो भने हत्यारा पत्ता लगाउने वा दुर्घटना मात्रै थियो भने पनि त्यसको सत्यतथ्य जनजनले थाहा पाउने गरी सत्य बाहिर ल्याउनुपर्ने हो ।
तर, यस विषयमा न सरकार, न राष्ट्रपतिले केही पहल गरेको देखियो । यदि यसरी रहस्यमै राख्नु थियो भने हत्या गरिएको हो भनेर किन आन्दोलन गरियो ? यसको जवाफ कसले दिने ?
आजको जस्तो सहज स्थितिमा पनि दास ढुङ्गा हत्या कि दुर्घटना के हो भनेर जनताले थाहा पाउन सक्दैनन् भने वर्तमान सरकार र सत्ताबाट हामीले अरु केही आस गर्ने ठाउँ छैन ।
साथै, मदन भण्डारीको जबजका कारण नेपालमा बढ्दै गएको कम्युनिस्ट लहरलाई कमजोर बनाउन एमालेको ९ महिने सरकारपछि किन अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले २०५१ फागुनदेखि जनयुद्ध भनेर आन्दोलन थाल्यो ?
मदनले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर जबजको लाइन अगाडि सारिरहेको अवस्थामा किन जनयुद्ध सुरु भयो ? जनयुद्धले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भए पनि ! यो किन ? कसरी ? कसकाे हितका लागि ? यस युद्ध अवधिभर देशको सत्ताभित्र भएका अनैतिक क्रियाकलाप, वैदेशिक नाङ्गो हस्तक्षेप (सत्ता परिवर्तन) किन भए ?
यस्ता क्रियाकलापले हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा पुग्यो ? कसले जवाफ दिने ? आपसमा अत्यन्तै विरोधी दुई कम्युनिस्ट पार्टी कसरी मिल्न सके ? मिल्नुको कारण जनतालाई के के भने ? अहिले के–के गर्दै छन् ? यसको सबै कुरा हाम्रा आँखाले नदेखौँ भने पनि देख्नुपरिरहेको छ ।
नहेरौँ भने पनि हेर्नुपरिरहेको छ । नसुनौँ भने पनि सुन्नुपरिरहेको छ । भन्नका लागि जनताका लागि भन्छन् । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र पदका निम्ती मरिमेटेर आपसमा लड्छन् ।
एउटा सेतो हात्ती पाल्न अप्ठ्यारो मानेका हामी नेपालीहरूले सयौँ सेता हात्ती पाल्नुपरेको हेरिरहनुपरेको छ ।
जनताको जीनवस्तर अझ खस्केको अवस्था छ । नेताहरूको जीवनशैली, बानी व्यवहार लवाइ–खुवाइ हुकुमी शैलीको पैरवी कुनै तानाशाहको भन्दा कम छैन ।
हामीले बुझेका थियौँ– कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएपछि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, सामूहिक खेती प्रणाली, समान बानी व्यवहार हुनेछ । धनी, गरिब, जात, धर्मका आधारमा भेदभाव हुने छैन । सबै समान हुनेछन् ।
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो । तर, न सामूहिक नेतृत्व देखिन्छ । न सामूहिक निर्णय भएको छ । न सामूहिक खेती प्रणाली, न अरु कुनै......!
यी सबै भन्ने कुरा न रहेछन् । वास्तविकताले यसै भनिरहेको छ । देखिएको पनि त्यस्तै छ ।
त्यस कारण आज ३ जेठ, नेकपाको इतिहासमै शक्तिशाली पार्टी र पार्टीको सरकार भएको बेलामा पनि मदन–आश्रित हत्याको वास्तविकता थाहा पाउन सकिएन भने इतिहासले सधैँसधैँ नेकपालाई धिक्कारिरहनेछ ।
साथै, जबजविरोधी कमरेड पचण्ड र जबजका खम्बा कमरेड ओलीले पार्टी एकीकरण गरी दुवै अध्यक्ष बन्नुको पनि कुनै रहस्य पो थियो वा छ कि भनेर खोज्नु नै मदन–आश्रितलाई सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, १५:३२:००
राजा वीरेन्द्र, दरबार हत्याकाण्ड र अस्थिर राजनीति
सामुदायिक विद्यालय स्तरोन्नतिका लागि शिक्षा बैंक
कोरोना विवादः डब्लूएचओको राजनीति कि पुँजीवादको ‘गोमन’